Thwebula Proxifier 3.28 Standard futhi Portable – Vessoft
Proxifier – Umbuso indawo ewusizo, evumela ukuba basebenze nge seseva izinhlelo, abangenawo lesi sici. Proxifier amathrekhi ngokuzenzakalelayo izicelo ukuthi zivela izicelo kanye uyisa uxhumano. Isofthiwe ikuvumela ukuqinisekisa ubumfihlo, isekela mail amakhasimende amaningi futhi kwenza ukuthumela noma ukuthola i-imeyili ngokusebenzisa seseva. Uhlelo ikuvumela ukuba basebenze namaklayenti ezahlukene, kubandakanya web-iziphequluli, FTP, ssh, IRC, ICQ, P2P amaklayenti ngenethiwekhi ohlukanisiwe internet nge firewall. Proxifier iqukethe ithuluzi eliwusizo ukuqapha uxhumano inethiwekhi.
Running izicelo ngokusebenzisa proxy server
Ukusekela for amaklayenti ezahlukene
Ukucasha of-Ikheli le-IP
Amazwana on Proxifier:
Proxifier Ahlobene software: